လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေများ၏အသံဇာတ်ကြောင်းများတွင်လိင်ကွဲလိင်ကွဲပြားမှုရှိသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအားလိင်အင်္ဂါနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအပေါ် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2012 Feb;41(1):185-97. doi: 10.1007/s10508-012-9937-3.
Chivers ML1, Timmers အေဒီ.
ယခင်သုတေသနအရလိင်ကွဲအမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုပုံစံများသည်သီးခြားမဟုတ်ကြောင်း၊ လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများသည်ပိုမိုနှစ်သက်သောနှင့်မနှစ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုပြသသည်။ ဤရွေ့ကားပုံစံများ, သို့သော်, အသုံးပြုသော audiovisual လှုံ့ဆော်မှု၏ပြင်းထန်သောနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောသဘောသဘာဝနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကလိင်ကွဲပြားမှုအားနည်းသောလိင်မှုနှိုးဆွမှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလိင်မှုနှိုးဆွမှု၏ကျား၊ မရေးရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့၏လိင်အင်္ဂါနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများအပေါ်ဆက်ဆံရေးဆက်စပ်မှုအခန်းကဏ္ examined ကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး ၄၃ ဦး နှင့်လိင်ကွဲလိင်ခြားသူ ၉ ဦး တို့၏လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ သူစိမ်းများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်ကြားနေတွေ့ဆုံခြင်းကိုဖော်ပြသည့်အသံဇာတ်လမ်းများကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတွေလိင်အင်္ဂါ arousal တစ် nonspecific ပုံစံပြသနေစဉ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအလုပ်သမားသုတေသနနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ယောက်ျား, ကျား, မရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal တစ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ပုံစံသရုပ်ပြ သေးပုဂ္ဂလဒိive္နှိုးဆွတဲ့အမျိုးအစား - တိကျတဲ့ပုံစံကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြား၏ကှဲပွားခွားနားခွငျးအားကျား၊
ဆက်ဆံမှုအခြေအနေသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်အင်္ဂါလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားသူငယ်ချင်းများကိုနှိုးဆွမှုသည်သူစိမ်းနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများထက်သိသိသာသာနိမ့်သည် - အမျိုးသားများမဟုတ်ပါ။ ဤရလဒ်များအရဆက်နွယ်မှုအခြေအနေသည်လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွင်ကျား၊